Obama oo dhexda uga soo dhacay eedeynta Madaxweyne Trump ee la dagaalanka Covid-19. – XAMAR POST
Obama oo dhexda uga soo dhacay eedeynta Madaxweyne Trump ee la dagaalanka Covid-19.
By Zakariye iiman On May 10, 2020
Madaxweynihii 44-aad ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa Madaxweyne Trump oo uu horay ugu wareejiyay xilka ku dhaliilay in uusan qaban waxyaabo muuqda oo looga hortagi karo faafidda Cudurka Coronavirus oo dalkaas ka dhigay wadanka ugu badan ee laga helay kiisaska.
Obama ayaa qaabka ay dowladda Mareykanka u wajahday cudurkan ku tilmaamay masiibo ba’an oo jahawareer abuurtay, waxa uuna dhibaatada ka dhalatay cudurkani ku eedeeyay qaabka dowladnimo ee maamulka madaxweyne Donald Trump.
Hadalkaan waxa uu sheegay isaga oo la hadlayay kaaliyeyaashiisii hore iyo taageerayaashiisa waxa uu tilmaamay in dhibaatadu ay tahay in maamulka Trump uu u fikiro qaab ah (maxaa iigu jira) sidaa awgeedna uu ku afceliyo dadka kale.
Kayleigh McEnany oo arrimaha warbaahinta u qaabilsan Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu cudurkaan u maareeyay si wanaagsan isla markaana la badbaadiyay nolasha dad badan.
Hadalkaan ayaa loo badiyay in uu jawaab u yahay eedeynta Obama ee maamulka Trump u jeediyay ee ah in uusan waxba ka qaban faafidda Covid-19, balse si toos ah uma aysan abbaarin Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack.
Mareykanka waxaa ku dhintay in kabadan 77,000 oo qof, halka cudurka uu ku dhacay guud ahaan 1,200,000 oo ruux, waxaana si maalinle ah loo diiwaangeliyaa xaalado cusub oo ah Dhimasho, bogsasho iyo dad cusub oo laga helayo.
Xayiraad ayaa la saaray gobollo badan oo katirsan Mareykanka bishii Maarso, waxaana dhawaan ka dibadbaxay shacabka, kadib markii ay sheegeen in lagu xanniban guryahooda isla markaana aan jirin isbadal muuqda oo wax looga qabtay faafidda cudurka in tirade kororto mooyee.
Madaxweyne Trump oo arrintaas ka falceliyay bishii April ee lasoo dhaafay waxa uu sheegay in uu awood u leeyahay qaadista xayiraadda balse Guddoomiyaasha Gobolada uu ka war sugayo tallaabada xigta oo ay qaadaan.
Waxa qorshuhu uu ahaa in bilawgii bishaan May uu qaado xayiraadda ama ugu yaraan uu dabciyo, si Goobaha Shaqada dib loogu furo iyada oo dadka ay fuliyaan talooyinka caafimaadka sida kala fogaanta, af xirka iyo qodobada kale.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in haatan cudurka uu gudaha u galay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka, kadib markii howlwadeeno iyo saraakiil halkaa ka shaqeysa laga helay, waana tan kordhisay dhaliisha gaabiska ah ee loo jeedinayo Madaxweyne Trump.
Maleeshiyad hubaysan oo dad shacab ah ku gowracaday dalka Congo.
Dhacdo naxdin leh oo ka dhacday magaalada guraceel